Umhla My Pet » Amacebiso Amathathu Online Dating Success
ngokuthi kim uLance
Amacebiso Amathathu Online Dating Success
ukubuyekezwa: Mar. 23 2020 | 3 min ukufunda
Entsha rhandzana lomboniso online? kakuhle, yikholwe okanye hayi, ukuthandana ngekhompyutha kuba enokhuphiswano nje, ukuba ingabi ngaphezu, ngaphezu ukuthandana zemveli. Musa ukuvumela oko ukuba kukudimaze, nokuba. Abantu abaninzi baye bafumana umhla, yaye ngokufuthi umtshato, ngeenkonzo ukuthandana online. Kukho amacebo kwaye ufumana iprofayile yakho ndaphawula ukhuphiswano yakho izicwangciso ezinokusinceda. Nanga amanyathelo amathathu qhinga onokuzenza ukuba unako ukunika iprofayile yakho inkangeleko nemvakalelo kufuneka ukutsala uhlobo lwabantu ninge nindithanda kumkhawulela.
incam 1: Khethela kwiProfayili Photo Egqibeleleyo
ifoto yakho ngomnye wemibandela ebalulekileyo eza kutsala abantu kwiprofayile yakho. Okokuqala kwaye ngaphambi kwento yonke, uqinisekise ukuba umfanekiso yakutshanje. Uqinisekise ukuba umfanekiso kuwe bra ngoxa kwikholeji ikhefu entwasahlobo emva 1995 ukuze abe cute, kodwa xa umhla yakho idibana ukuba ulindele ukuba ikhangeleke wenza kuni kwikholeji, Umhla wakho uya kudana. Oku ukwenza ukungathembani kwaye ibangele umhla wakho ukuba nomsindo tlhela. Oku soze yinto elungileyo xa uzama ukuqalisa ulwalamano.
ngokunjalo, ukcola ifoto eya ukubonisa iimpawu okona. Qinisekisa ukuba unxibe uncumo lobuhlobo, uya kuba nomtsalane kakhulu ngaphezu alisa okanye, cacileyo, afing. Soloko ukuphepha iifoto apho wena nomnye umntu, okanye, ngakumbi ke, ukuba ugawule omnye umntu ngaphandle photo, kuphela ukuba ashiye ngasemva ingalo ongaqondakaliyo. mhla zenu bexakaniseka apho umntu okunene nguwe okanye azibuze ukuba ngubani lo Katy ìmysterious bobabo.
incam 2: Sebenzisa lomsebenzisi wakho Ukumtyhila onomdla
Usenokucinga lomsebenzisi wakho yindlela nje ukuba ungene kwinkonzo yakho ukuthandana online, kodwa oku isnít kwimeko. lomsebenzisi wakho yenye yezinto zokuqala ukuba umntu uza kufunda malunga nawe kunye lomsebenzisi olungileyo kusenokuthetha umahluko phakathi imboniselo yabucala kunye iprofayile kugqitha phezulu. Ubuchule eqhelekileyo ukuhamba lomsebenzisi yemveli abangaziwayo ezifana ìJenny321î kodwa kutheni kuphoswa ithuba isitshixo ukubamba someoneís ingqalelo okanye lokutyhila kancinci ngokwakho?
Yenza lomsebenzisi lwakho loqobo baze bakwenzele kuthetha into encinane ngobuntu yakho. UPick SweetSinger’ njengoko lomsebenzisi wakho ukuba nomsetyenzana oculayo okanye ìDodgersDudeî ukuba Dodgers fan yakho ukufunda ukhangela inkampani. lomsebenzisi wakho abakrelekrele akuyi kuphela ukwabelana kancinci ubuntu bakho okanye imidla, kodwa kwakhona ukutsala abantu umdla efanayo. Kodwa lumkela ukuba anike ingcamango ephosakeleyo. Nje ngokuba ukutolika ìFunLovinî lomsebenzisi ukuba kuthetha kuwe ukuba wonwabe, umntu ukubukela iprofayile yakho ucinga ìFunLovinî kuthetha ukuba ukhangela loviní fun, ukuba uyayazi ndithetha ukuthini.
incam 3: Donít Yithi It, Yibonise ubunyani! Kwaye Yiba ethile
Xa ekuphuhliseni inkcazo iprofayile yakho, nani nilingeke ukubhala into efana ìIím funny kwaye smart kunye ingqiqo humor.î Le yinto uluhlu yindinisa of adjectivesÖ izichazi efanayo ukuba ebonisa ukuya kumawaka kwezinye kweeprofayili. Ukuba ufuna iprofayile yakho ngokwenene lubalasele, ufuna ukuchaza wena nkcukacha.
Endaweni yokuthi wena “hlekisa” okanye abe “noburharha”, ukwenza iprofayili yakho funny. Crack eziliqela iziqhulo nencasa okanye abalise ngesiganeko funny. Oku kuya kuba kumbonisi wakho ukuba uhlobo ingqiqo uburharha unayo. Ukuba uchwayitile linomtsalane kuloo kumboniseli, baya kuqhagamshelana nawe. Kunokuba nje echaza ukuba ìsmartî, uluhlu lwakho Iincwadi ezazithandwa okanye umdla yakho babeza kumbonisi wakho indlela smart wena. Oku kuya kukunika kumboniseli yakho eminye imizekelo engqalileyo ukuba yena okanye yena uya kuba nako zinxulumene ngqo.
khumbula, ngenxa nje unayo iprofayile phezulu, doesnít akuthethi ukuba nangoko uya kufumana iimpendulo. Ezi ngcebiso ezintathu ngokuqinisekileyo kuya kukunceda, kodwa ukudlala jikelele imixholo iprofayile yakho ude siyaqala ukuba iziphumo ofuna. Ukuba akukho namnye ophendula kuluhlu lwakho umdla, Wasixhoma abanye abasebatsha. Tshintshela iifoto zakho kanye ngeliny'ixesha ukubona ukuba uhlobo impendulo oyifumanayo. Njengoko ekufuniseleni iprofayile yakho ukuthandana online, uya ngethemba kuqalisa ukufumana iimpendulo okudala efunana nawe ngenxa.
The Bedlam Farm Checklist Kuba Abalungiselela Dog Abanini
3 Izizathu ukuba Thabatha Puppy lwakho Usuku lokuqala
Yintoni Ngokwenene Kufuneka wazi: Chivalry nguKumkani